brag वालपेपर — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
तपाईं थिए एक दैनिक सम्झाउने आवश्यक घमन्ड गर्न निर्माण? हामी तपाईंको फोन लागि केही वालपेपर सँगै राख्नुभएको, ट्याब्लेट, वा डेस्कटप. त्यहाँ brag लोगो संग तल तीन सरल विकल्प हो. थप पछि आउन छन्. आनन्द लिनुहोस्!
डाउनलोड आईफोन वालपेपर • डाउनलोड आईप्याड वालपेपर • डाउनलोड डेस्कटप वालपेपर
दाऊदले • अप्रिल 9, 2014 मा 2:52 बजे • जवाफ
निःशुल्क डाउनलोड को लागि धन्यवाद. आफ्नो परिवार र सेवाको परमेश्वरको आशिष्.
Enan † • अप्रिल 12, 2014 मा 5:04 बजे • जवाफ
को वालपेपर ब्रो को लागि धन्यवाद. तिनीहरुलाई माया गर. त्यहाँ बस ब्रेगिङ्ग भन्दा तिनीहरूलाई अझ ठूलो अर्थ छ, तर एक साँचो राजा मा ब्रेगिङ्ग, येशूले. अनमोल रहनुहोस्. †
ली • अप्रिल 16, 2014 मा 5:45 बजे • जवाफ
वालपेपर लागि धन्यवाद. म तपाईंलाई हेर्न र आफ्नो हरेक चाल. म आफ्नो यस्तो सकारात्मक romodel परमेश्वरको धन्यवाद
बोल्ट • जुन 9, 2014 मा 12:54 बजे • जवाफ
म यात्रा भन्न Gotta, म साँच्चै आशिष् छु सँधै म सुन्न, मई you'r जीवनमा परमेश्वरको महिमा चम्कने र आफ्नो परिवारको forver. म आफ्नो छोरा ग्रह पृथ्वी मा luckiest मध्ये एक छ भन्न आवश्यकता. र त्यो एक रोबोट पक्कै हो. #116 #rhemaprocess @iamslizybolt
पामेला • अगस्ट 29, 2014 मा 5:59 बजे • जवाफ
तपाईं यात्रा धन्यवाद. तपाईंको शब्द मात्र परमेश्वरको महिमा तर तिनीहरूले मलाई उहाँसँग मेरो सम्बन्ध मा ध्यान राख्न मदत. धेरै माया.
क्रिस • सेप्टेम्बर 12, 2014 मा 4:43 बजे • जवाफ
हे ब्रो, ठूलो प्रशंसक, परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष. हामी ख्रीष्टमा एक हो.
irenesalcedo • सेप्टेम्बर 23, 2014 मा 4:52 बजे • जवाफ
मेरो नाम इरेन Salcedo छ, म संयुक्त राज्य अमेरिका सेना मा सेवा र म फोर्ट आनंद मा तैनात छु, TX. म मेरी आमा चरण संग निदान थियो आफ्नो सबैभन्दा ठूलो fans.This वर्ष को एक हुँ4लिंफोमा क्यान्सर. जब उनले पहिलो जांच थियो, डाक्टर भने यो एक चरण थियो 2, र तिनीहरूले Chemo चरण दुई को लागि उनको उपचार सुरु. हालै तिनीहरूले पहिलो स्क्रिनिङ देखि परिणाम तुलना, जो तिनीहरूले एक चरण थियो 2, साँच्चै चरण थियो 4. यो आफ्नो गल्ती थियो. मेरी आमा अझै चरणको लागि उपचार भइरहेको छ4र अझै पनि chemo मार्फत जाँदै. chemo भन्दा भएपछि त्यो विकिरण सुरु हुनेछ, र हामी बिदाको लागि उनको वरिपरि हुन सक्दैन. सबै म तिमी मान्छे को सोध्न कि, उनको स्वास्थ्य को लागि प्रार्थना गर्न छ. त्यो परमेश्वरको सेवक छ र मेरो sibilings र आफैलाई प्रभुको तरिका देखाउनुभएको छ. र परमेश्वरको नियन्त्रण छ भनेर दैनिक सम्झना गराउँछ, म सिर्फ तिमी सिर्फ आफ्नो प्रार्थनामा उनको राख्न भनेर सोध्न, उनको नाम Yvonne क्यास्ट्रो छ.
उहाँको लाइट मा
जुलिया Rubbed • अक्टोबर 14, 2014 मा 9:38 छु • जवाफ
म आवश्यक सबै छ 1:16 मेरो प्रभु मा घमन्ड गर्न, मेरो राजा मा घमन्ड. उहाँले यो कुरा चल्छ cuz बारेमा 'दैनिक IM कुरा! वालपेपर लागि धन्यवाद, यात्रा!
Fhil • डिसेम्बर 6, 2014 मा 4:49 छु • जवाफ
thankz मालिक, अब मेरो dextop पृष्ठभूमि brag हेर्न….